Shiinaha Filter Wire Mesh Saxannada/Baakadaha soo saarayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Da Shang
Qalabka mesh silig ee la heli karo waxaa ka mid ah:
Naxaas, Naxaas, Copper, Galvanized, Steel Plain, Sintered, Disc steel steel, Welded disc ahama.
Qaabka: Wareega, Oval, Square, Rektangular, Sagal, iwm
Cabbirka: Loo habeeyay shuruud
Lakabyada shaashadda: Hal, Laba-laab, Lakab badan
Cidhifyada fiilooyinka mesh silig: hal, laba-laab ama lakabyo badan oo cajalladaha shaashadda shaashadda shaashadda ah, waxaan ku wada samayn karnaa annagoo daboolayna gees. Qalabka geesaha caadiga ah waa xaashi bir bir ah, xaashi naxaas ah, xaashi aluminium, caag, caag, iwm.
Aan lahayn gees: labalaab, cajalado mesh-lakabyo badan leh, waxaan ku wada samayn karnaa alxanka, sintering iyo tiknoolajiyad kale. Wixii lakabka mesh -lakabka ah, badiyaa, ma jirto baahi loo qabo in la xiro ama la qallajiyo, iyo shaashadda shaashadda mesh si toos ah ayaa loo isticmaali karaa.
Waxaan u isticmaalnaa darajooyinka qaaliga ah ee birta aan birta lahayn si looga hortago faddaraynta cufan la dhalaaliyay iyadoo la siinayo wax bikrad ah oo saafi ah oo ku jira qashin -qubka halkaas oo qarka biraha u dhaqmo sidii gogosha si looga hortago daadashada. Waxaan sidoo kale ku siinnaa xirmooyinkan shaandhaynta sifo gaar ah sida ku cad tilmaamaha macmiilka.
Disc mesh silig filter waxaa loo isticmaalaa caag, caag, batrool, kiimiko, iftiin, daawo, macdan, mishiino, dhisidda maraakiibta, cuntada (sida disc filter kafeega, shaashadda shaandhaynta beddelka saxaafadda Faransiiska), shaashadda soobaxaysa, derbiga faashadda daboolka khamriga iyo wixii kale daboolka faashadda daboolku wuxuu leeyahay furitaan u oggolaanaya in alaabtaadu neefsato, waxayna alaabtaada ka ilaalinayaan dhammaan cayayaanka iyo qaybaha hawada, iyo warshadaha kale. Disc filter ayaa sidoo kale ku habboon baaritaanka hadhuudhka iyo saliidda, shaandhaynta shaandhaynta hawada ee baabuurka, kala soocidda nuugista, nuugista, uumiga.
Hore: Shaashadda Shaandhaynta Silsiladda
Xiga: Ahama Steel caaryada Wire mesh